Ursula ဗွန် der Leyen (အနာဂတ်အီးယူသမ္မတ) ကိုဗြိတိန်ဘုရင်စနစ်ကဲ့သို့တူညီသောဖြစ်မဖြစ်ကိုသွေးကနေအမှန်တကယ်ရှိပါသလား? မာတင် Vrijland
Ursula ဗွန် der Leyen (အနာဂတ်အီးယူသမ္မတ) ကိုဗြိတိန်ဘုရင်စနစ်ကဲ့သို့တူညီသောဖြစ်မဖြစ်ကိုသွေးကနေအမှန်တကယ်ရှိပါသလား?
အတွက် Filed NEWS ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း	by မာတင် Vrijland	ဇူလိုင်လ42019 အပေါ်	• 20 မှတ်ချက်
သင်သိနာမည်ကျော်ကိုးကား Winston Churchill ဖြစ်ကောင်းသတိရ: "သမိုင်း Victor ကရေးသားထားသည်။ " ရဲ့အသစ်ကအီးယူကိုသမ္မတ Ursula ဗွန် der Leyen အပေါ်အချို့သောဆှစေဉျမြိုးဆကျသုတသေနပွုကွပါစို့ သငျသညျသူတို့အားဒီမိုကရေစီနည်းကျရွေးကောက်တင်မြှောက်အမျိုးသမီးတစ်ဦးရုတ်တရက် Frans Timmermans ၏ရည်ရွယ်နေရာအပေါ်မှာယူနိုင်ကြောင်းသိရကြ၏။ ဒါဟာ Ursula ဗွန် der Leyen, အီးယူရဲ့သမ္မတသစ်ဘယ်သူအားမျှမတိုက်ဆိုင်မှုပုံရသည်။ သူတို့မြင့်မြတ်သောနွယ် Von Saxe-Coburg နှင့် Gotha ၏ဖြစ်ကြောင်းညွှန်ပြအံ့သောငှါအရိပ်လက္ခဏာရှိပါတယ်; ဗြိတိသျှဘုရင်စနစ်၏အဖြစ်အတူတူဖြစ်မဖြစ်ကိုသွေး။
အိမ်သူအိမ်သား Saxe-Coburg နှင့် Gotha (Saxe-Coburg-Gotha) မူလကသူ၏အဖွဲ့ဝင်အများအပြားဥရောပနိုင်ငံများတွင်အုပ်ချုပ်ဂျာမန်မင်းဆက်ဖြစ်ခဲ့သည်။ အဆိုပါမင်းဆက် 1826 နှစ်ဆ Saxe-Coburg နှင့် Gotha အတွက် (အိမျတျောကို Wettin ထံမှ) Saxe-Coburg-Saalfeld ၏ ducal အိမ်သူအိမ်သားမှထကျင်းပခဲ့သည်။ ဒီ genus ၏မြို့၏အဆိုပါ 19e ရာစုအတွင်းအခြားနိုင်ငံများတွင်ကျင်းပခဲ့ကြသည်။ 1917 ရှင်ဘုရင်ဂျော့ခ်ျ V ကိုဝင်ဆာအတွက်ဗြိတိသျှတော်ဝင်မိသားစုကို၏အမည်ကိုပြောင်းလဲခဲ့သည်။ ဗြိတိသျှသူတို့လျှို့ဝှက်စွာ (နယ်သာလန်ကဲ့သို့) ဂျာမန်ဘုရင်စနစ်အားဖြင့်အုပ်ချုပ်ကြသည်ကိုမေ့လျော့ကြလိမ့်မည်။ ထိုသို့အီးယူယခုလည်းနောက်ဆုံးမှာအတူတူပင်မြင့်မြတ်သောဖြစ်မဖြစ်ကိုသွေး၏လက်၌ပုံရသည်။
အဆိုပါ Churchill ၏အခွခေံမူဆက်ဆက် Google ကသက်ဆိုင်နေသောကြောင့်ငါသည်လည်း, ဤဆောင်းပါးကိုသာသံသယစီရင်ကြောင်းအလေးအနက်ဖော်ပြချင်ပါတယ်။ ကျနော်တို့လက်ရှိဟောင်းသတင်းစာဆောင်းပါးများသို့မဟုတ်စာအုပ်တွေမှာကြည့်ဖို့စာကြည့်တိုက်သို့မသွားဘူး, ဒါပေမယ့် Google ရဲ့အချက်အလက်အားလုံးကို၏အရင်းအမြစ်ဖြစ်ပါတယ်။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ငါသည်အဘယ်သူ၏အမည်သစ်ကိုရသောအမှန်တကယ်အဲလ်ဘရက်ခ် (အမည်သစ်ကိုရသောဖခင်ကြည့်ပါ) ဒီထူးခြားတဲ့အမျိုးသမီးတစ်ယောက်သို့ထပ်မံသုတေသနပြုဘို့ဤဆောင်းပါးအပေါ်ပထမဦးဆုံးခြေလှမ်းကိုယူမှမျှော်လင့်ပါတယ်။ ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်မျှကျောက်ကဲ့သို့အထက်သို့မဟုတ့်ယူဆချက်ကမှားကြောင်းပြသထားတယ်:
Ursula ဗွန် der Leyen နာမကိုအမှီ Ursula အဲလ်ဘရက်ခ်နှင့်အဟောင်းတော်ဝင်မင်းဆက် (ကဖါရောဘုရငျဖြစ်မဖြစ်ကိုသွေး) ဖြစ်ပါသည်
အဘယ်အရာကိုကျနော်တို့ Google တွင်ရှာတွေ့နိုင်ပါသည် Ursula Julius Ernst တဲ့ Carl အဲလ်ဘရက်ခ်၏သမီးခဲ့သောကွောငျ့ဖွစျသညျ။ ဒီမြေတပြင်လုံး pedigree တင်းကျပ်ကြပါစို့။ ငါ pedigree ကိုခြေရာခံရန်အလင့်များကလစ်နှိပ်ခြင်းအဖြစ်သူ့ဟာသူအကြံပြုပါသည်။
Ernst တဲ့ Carl တဲ့ Carl Friedrich အဲလ်ဘရက်ခ်, သားသား မတ်လ 28 1902။ ဒါကသားသားဖြစ်၏ ဂျော့ခ်ျအလက်ဇန္ဒားအဲလ်ဘရက်ခ် en မာရိကအဲလ်ဘရက်ခ် Ladson (အတူတူပင်ဖြစ်မဖြစ်ကိုသွေးအတွင်းလက်ထပ်တော်ဝင်မိသားစု, မြင့်မြတ်သော, ဖာဖြစ်မဖြစ်ကိုသွေး၏ကမ္ဘာပေါ်မှာပုံမှန်ဖြစ်ပါသည်) ။ ဂျော့ခ်ျအလက်ဇန္ဒားအဲလ်ဘရက်ခ်အလှည့်အတွက်တစ်သားဖြစ်၏ ဂျော့ခ်ျအဲလက်စ်။ အဲလ်ဘရက်ခ် en Luis အဲလ်ဘရက်ခ် (ဒါဟာအဲလ်ဘရက်ခ်ဖြစ်နေဆဲ - သှေးရငျးခငျြးကာမဆကျဆံခွငျး) ။ အဲလက်စ်အဲလ်ဘရက်ခ်၏သားဖြစ်၏ ကားလ်ဖရန့် Georg ဗွန် Knoop en Kath ။ အဲလ်ဘရက်ခ် (Giffenig)ဒီကားလ်ဖရန့် Georg ဗွန် Knoop အဲလ်ဘတ်၏မြေးဖြစ်သူသည်အဘ၏တစ်ဦးကထူးခြားတဲ့အမည်, (အရှင်ယူဆရသည်သူ၏အဘိုးမိသားစုအမည်အားပြောင်းလဲပစ်) ။ သူ၏အဘကားလ်ဖရန့် Georg ဗွန် Knoop နှင့်သူ၏ဖခင်ဖရန့်သြဂုတ်လ Heinrich ဗွန် Knoop ဖြစ်ခဲ့သည်။ သူ့ဖခင်နောက်ဆုံးမှာအခြားအဲလ်ဘရက်ခ်, အမည်ရ Johann တွင် Friedrich အဲလ်ဘရက်ခ်ဖြစ်ခဲ့သည်။
ကျွန်တော်ဆိုဒ်ကို Geni.com အပေါ်ဖြစ်မဖြစ်ကိုသွေးလေ့လာလျှင်, ငါတို့သည် Von Knoop အမှန်တကယ်အဲလ်ဘရက်ခ်များအတွက်တူညီမိသားစုလာပြီကြောင်းသိမြင်ရကြ၏။ တစ်ခါတစ်ရံထိုသို့နှင့်တစ်ခါတစ်ရံအဲလ်ဘရက်ခ်ဗွန် Knoop ။ အဲဒီမိသားစု "တော်ဝင်အသွေးတော်" နှင့်ဒါဝိဒ်၏စတားနှင့်မိသားစုမောက်အတွက်ခြင်္သေ့ကိုဆောင်သောဖြစ်ဟန်ရှိသည်။ ကျနော်တို့ကလိမ္မော်သီးကနေကိုသိတူညီသည်ခြင်္သေ့။
အဲလ်ဘရက်ခ်ထို့နောက်ဧကန်အမှန်ကျွန်ုပ်တို့သည်နာမတော်ကိုအမှီ ပြု. Saxe-Coburg နှင့် Gotha မှာရောက်လာနာမတော်ကိုအမှီ ပြု. , ထို website တွင်တွေ့ရှိနိုင်ပါသည် 4crests.com။ ဒီနေရာတွင်ကသူတို့ရဲ့ website သို့ကနေကိုးကားသည်:
ဤသည်ကျယ်ပြန့်အင်္ဂလိပ်, ဂျာမန်, ပြင်သစ်ကာတာလ, အီတလီ, စပိန်နှင့်ဟနျဂရေီနာမကိုအမှီမူလဒြပ်စင် (မြင့်မြတ်သော) ADAL နှင့် BERHT (ထွန်းတောက်ကျော်ကြား) ၏ရေးစပ်ခဲ့သည်ဘယ်ဟာတစ်ဂျာမန်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးနာမကိုအမှီ ALBRECHET မှဆင်းသက်လာခဲ့သည်။ ဤသည်အမည်များပေးထားအသုံးအများဆုံး Germanic've တဦးဖြစ်ခဲ့သည်များနှင့်အမျိုးမျိုးသောအလယ်ခေတ်မင်းညီမင်းသားတွေ, စစ်ရေးခေါင်းဆောင်များနှင့်အကြီးအခရစ်ယာန်ဘုန်းကြီးများကဘွားမြင်ခဲ့သည်, အထူးသစိန့်အဲလ်ဘတ်နှင့်ပရာ့ဂ် (ခကျြ Vojtech အမည်, လက်တင်အမည်ဖြင့် Adalbertus), 997 အတွက်အာဇာနည်သေဆုံးခဲ့သူတစ်ဦး Bohemian မင်းသား ခရစ်ယာန်ဘာသာဖို့ Prussian ပြောင်းဖို့ကြိုးစားနေတဲ့; စိန့်အဲလ်ဘတ်မဟာ (1193-1280?) Aristotelian ဘာသာရေးပညာရှင်များနှင့်နည်းပြဆရာသို့မဟုတ် Thomas Aquinas အမည်ရှိ; Brandenburg အမည်ရှိသတို့သားနှင့်အဲလ်ဘတ်ဟာထမ်းရွက် (1100-70) Margrave ။ ဥရောပနိုင်ငံများတွင် zoals အများစုမှာအင်္ဂလန်, စကော့တလန်နှင့်ပြင်သစ်အတွက်မျိုးရိုးအမည်ဆယ်သုံးခြင်းနှင့်တဆယ်လေးရာစုနှစ်ပေါင်းများစွာဖွဲ့စည်းခဲ့ကြသည်။ အဆိုပါဖြစ်စဉ်ကိုဆယ်ငါးရာစုများကလူဦးရေရဲ့အများဆုံးတစ်စက္ကန့်နာမကိုအမှီဝယ်ယူခဲ့သောသွားရမည်လူများ, မျိုးရိုးအမည်ရှိသည်မဟုတ်ခဲ့ပါအတန်ငယ်အစောပိုင်းကစတင်ခဲ့ဖူးနှင့် 19th ရာစုသို့အချို့သောအရပ်တွင်ဆက်လက်ခဲ့ပေမယ့်ဆယ်ဘို့တဘို့အတွက်စံ Tat နှင့်ဒသမရာစုနှစ်များစွာ။
အထူး-အပါအဝင်ဂျာမဏီ၏ရှင်ဘုရင်သူအဲလ်ဘတ်ငါ (1255-1308), Habsburg ၏ Rudolph ငါ၏သားအများအပြားအထူးသရှိပါသည်။ သူဟာထို့နောက်Göllheim (1298) မှာစစ်တိုက်ရာတွင်ရှုံးနိမ့်ခြင်းနှင့်ဦးသေဆုံးပြီးဘယ်သူ့ကိုနာဆောများ၏ဖြုတ်ချဒေါ့ဖ်မှအတိုက်အခံအတွက်ဂျာမဏီရှင်ဘုရင်ရွေးကောက်တင်မြှောက်ခံခဲ့ရသည်။ သူကဘုရင်စနစ်၏တန်ခိုး restore လုပ်ဖို့လုံ့လရှိသူကိုရှေ့ဆက်ဆောင်ရွက်ခဲ့နှင့်ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာမှူးမတ်များ၏ဒါကလျှော့ချကား, မိမိတူယောဟနျသဖွငျ့ disaffected မြစ် Reuss ဖြတ်ကူးနေစဉ်အသတ်ခံခဲ့ရသည်။ ဘုရင်မကြီးဗစ်တိုးရီးယားမှအဲလ်ဘတ်မင်းသားဖှဲ့ (1819-61) Coburg အနီး Schloss Rosenaux မှာမွေးဖွား။ သူ Saxe-Coburg-Gotha ၏ Duke ၏သားငယ်ဖြစ်ခဲ့သည်။ 1840 ခုနှစ်တွင်သူသည်သူ၏ပထမဆုံးဝမ်းကွဲဘုရင်မကြီးဗစ်တိုးရီးယားတစ်ရာသက်ပန်မေတ္တာပွဲစဉ်ဖြစ်လာဆိုလိုသည်မှာတစ်ဦးလက်ထပ်ထိမ်းမြားလက်ထပ်ခဲ့သည်။ သူ 1857 အတွက်မင်းသားဖှဲ့၏ခေါင်းစဉ်ပေးထား was've ။ သူတို့လက်ထပ်ထိမ်းမြားတလျှောက်လုံးသူကအကျိုးသက်ရောက်မှုအတွက်ဘုရင်မကြီးရဲ့ကိုယ်ရေးအတွင်းရေးမှူးဖြစ်ခဲ့သည်။ သူ၏ဆုံးမစကားအများအားဖြင့်တရားမျှတမှုနှင့်ဝေး-မြော်အမြင်ပေမဲ့ဖြစ်သောကြောင့်မိမိအဂျာမန်ဆက်သွယ်မှု၏ဝန်ကြီးများမယုံကြည်မှုနှင့်အများပြည်သူ Misgivings, သူ၏နိုင်ငံရေးသြဇာလွှမ်းမိုးမှုကန့်သတ်။ သူကသူ့မုဆိုးမအားဖြင့်ကိန်းအောင်းရာ၏ရှည်လျားသောကာလ occasioning, 1861 အတွက်အူရောင်ငန်းဖျား၏အနိစ္စရောက်လေ၏။ Kensington ဥယျာဉ်ထဲမှာအဲလ်ဘတ်သတိရအောက်မေ့ 1871 ၌သူ၏မှတ်ဉာဏ်ထဲမှာစိုက်ထူခဲ့သည်။
Ursula ဗွန် der Leyen အမှန်တကယ်အဲလ်ဘရက်ခ်ဖြစ်၏ သူမ၏ဖြစ်မဖြစ်ကိုသွေး (မြင့်မြတ်သော) ADAL နှင့် BERHT (ထွန်းတောက်ကျော်ကြား) အတွက်ရပ်တည်ရသော Albrechet ဖြစ်ပါသည်။ မိခင် Ursula '' ပုဂ္ဂလိက '' အပေါ် geni.com မှတဆင့်ထားပေမယ့်အဲလ်ဘရက်ခ် (တစ်ခါတစ်ရံဗွန် Knoop) မိသားစုတစ်ခုလုံးကိုသမိုင်းပေးထားကျနော်တို့ကတကယ်တော့ဒီအဲလ်ဘရက်ခ်နှင့်ဗွန် Knoop (အတူတူပင်ဖြစ်မဖြစ်ကိုသွေးကြောင်းယူဆနိုင်ပါတယ် ) ဖြစ်ခဲ့သည်။ အကြံအဖန် '' မိသားစုမှာ running (သို့မဟုတ် "insest ကိုခေါ်) ၏တစ်ခုလုံးကိုသမိုင်း။ သူမ၏ဖခင်တစ်ဦးအာဇာနည်အဲလ်ဘရက်ခ်ကြောင့်အဘယ်ကြောင့် Ursula အဆိုပါအမညျ Von der Leyen ကိုဘွားသင့်တယ်ထင်မှမအကြောင်းပြချက်လည်းရှိပါသည်။ Ursula အရှင်၎င်း၏အမည်ကိုပြောင်းလဲခဲ့ပါသည်။
အဆိုပါ 4crests.com က်ဘ်ဆိုက်၏ဖော်ပြချက် မှစ. ငါတို့သည်ရှင်းလင်းစွာဒီအဲလ်ဘရက်ခ်မိသားစုဖြစ်သောသူ့ဦးလေးဆရာယောဟနျအဲလ်ဘတ် (အဲလ်ဘရက်ခ်တဦးတည်း၏လက်ထပ်ထိမ်းမြားမှတဆင့်ဗြိတိသျှတော်ဝင်မိသားစုကိုချိတ်ဆက်စေခြင်းငှါလာနိုငျသညျ - စိတ်ထဲအတွက် inbreeding နဲ့တူ - ငါအသတ်ခံအဲလ်ဘတ်) နှင့်ဘုရင်မဗစ်တိုးရီးယား။ ယောဟန်သည်အဲလ်ဘတ် Saxe-Coburg-Gotha ဧရိယာ၏ Duke မှာသားကြီးထို့ကြောင့် Albrechet လို့ခေါ်တဲ့မိသားစုလိုင်းကနေလာပါတယ်။ Albrechet သို့မဟုတ်အဲလ်ဘရက်ခ်ဗွန် Saxe-Coburg နှင့် Gotha ကဲ့သို့တူညီသောမိသားစုဖြစ်ပါတယ်။ Ursula ဗြိတိသျှတော်ဝင်မိသားစုကဲ့သို့တူညီသောဖြစ်မဖြစ်ကိုသွေး၏ဖြစ်ဟန်! နှစ်ဦးစလုံးဖြစ်မဖြစ်ကိုသွေးဧရိယာကတကယ်တော့ Saxony Coburg နှင့် Gotha ကနေအစပြုတာနဲ့ဒါကြောင့်လျှို့ဝှက်စွာအဲလ်ဘရက်ခ်ရဲ့။
သင်ကအမှန်ပင်ဘုရင်မကြီးအဲလစ်ဇဘက်၏သမီးပါလိမ့်မယ်, Ursula လိုင်းများ၏မျက်နှာကိုကြည့်ပါ။ ကျနော်တို့သင်တန်း၏, မှနျးမည်မဟုတ်ပေမယ့်ဒါဟာအရိယာဖြစ်မဖြစ်ကိုသွေးအဲလ်ဘရက်ခ်ကနေသူတို့ကရှင်းပါတယ် - (Albrechet လည်း Von Knoop ခေါ်) လာပါတယ်။ ငါတို့သည်အီးယူဒီမိုကရေစီနှင့်ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်းနှင့်ဂျီဘရောလ်ဥရောပသမဂ္ဂအဖွဲ့ဝင်ဆန္ဒခံယူပွဲအီးယူ၏နိဂုံးကိုဖြစ်ပေါ်လိမ့်မည်ဟုယူဆ။ အဘယ်သူမျှမပြုလုပ်အပေါင်းတို့သည်မိမိတို့ဖာအလို့ငှာကတည်းကရသောမြင့်မြတ်သောဖြစ်မဖြစ်ကိုသွေး, ဒီမိုကရေစီယောင်နှင့် polarization ကိုနှင့်ပရမ်းပတာ၏ဂိမ်းကိုဖန်တီးရန်စီမံခန့်ခွဲပါတယ်။ အဲဒီမှာဘရပ်ဆဲလ်မှာရှိတဲ့ရာဇပလ္လင်ပေါ်မှာတစ်မိဖုရားဖြစ်ပြီးသူမ၏အမည်အား Ursula အဆိုပါဖြစ်မဖြစ်ကိုသွေး Albrechet / အဲလ်ဘရက်ခ် Ursula အဲလ်ဘရက်ခ်ဖြစ်ပါတယ်။
source link ကို entries တွေကို: wikipedia.org, Geni.com, 4crests.com
ဒတ်ခ်ျရွေးကောက်ပွဲကို Timmermans left မှလက်ျာဘက်ကနေ4လအတွင်းသို့လှည့်? မဲဆန္ဒရှင် cheat!
Ein Reich, Ein Volk Ein Fuhrer သို့မဟုတ်ပဲအီးယူကြိုဆို?
Greta Thunberg ၏အဖိုးဖြစ်သူသည် eugenics မှတစ်ဆင့်ဖန်လုံအိမ်အာနိသင်နှင့်လူ ဦး ရေကိုလျှော့ချရန်တီထွင်သူဖြစ်သည်။
ဥရောပ၌ပရမ်းပတာမိတ်ဆက်နိုင်သလား Boris Johnson က (အော်တိုမန်ဘိုးဘေးဘီဘင်) ကိုအော်တိုမန်အင်ပါယာမြှင့်ကြလိမ့်မည်နည်း
Tags:: nobility, မြင့်မြတ်သော, နွယ်ဖွား, Alberech, Albrach, ဖြစ်မဖြစ်ကိုသွေး, ဖြစ်မဖြစ်ကိုသွေး, ဗြိတိန်, Frans, စာရင်းဝင်, Genie, Gotha, မိဖုရား, နန်းတော်, Saxe-Coburg-Gotha, pedigree, Timmermans, Ursula ဗွန် der Leyen, Victoria, von Saxe-Coburg, ဝင်ဆာ
4 မှဇူလိုင်လ 2019 13: 33
စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့စာအုပ်ပါမယ်မြတ်သောမိသားစုများအကြောင်းကို Semi-Gotha ဖြစ်ပါတယ်။ Gotha Gothic ဇာစ်မြစ်ဆန့်ကျင်၏သေချာပေါက်မ။ ကျနော်တို့ယေဘုယျလူဦးရေရဲ့တကနောက်ခံဖျောက်ရန်ရှေးဦးစွာ မှစ. အတုအမည်များကိုအတူလုပ်ကိုင်နေကြသည်။
4 မှဇူလိုင်လ 2019 14: 28
နေဆဲမသက်မသာအနီးကပ်😀 "ငါသည်ဂျာမန်တို့၏အသွေးပေါ့" ဒါပေမဲ့သင်တန်း၏သင်တန်းသင်တို့၏မဲရေတွက်မရှိသညှိနှိုင်းဖြစ်ပြီး, သောကွောငျ့ဖွစျသညျ။ သူတို့နေဆဲထံမှငါးမျှားဖို့ရေကန်ကိုဖြတ်ပြီးတဲ့ရေကန်ရှိတယ်လုပ်ပါ။ အဆိုပါဆိုရှယ်လစ် Utopia, လေ့ကျင့်စတင်ရန်အချိန်တစ်အချက်ဖြစ်ပါသည် ...
4 မှဇူလိုင်လ 2019 15: 56
ကောင်းပြီကျနော်တို့ရှေ့မှာမြင်ကြပြီဘယ်မှာအင်္ဂလန်, ပြေးကြ ..
Ursula ရဲ့အဖေ Ernst အဲလ်ဘရက်ခ် - Lower Saxony ၏ထို့နောက်ဝန်ကြီးချုပ်နှင့်အုပ်စုရဲ့ avowed ရန်သူတဦးတည်း - သူမကမှားယွင်းသောနာမကိုအမှီနှင်းဆီ Ladson အောက်, Scotland Yard ကနေကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးနှင့်အတူ LSE မှာလေ့လာခဲ့ရှိရာလန်ဒန်အသက် 19 မှသူမ၏စေလွှတ်ခဲ့သည်။
သူမကလေးတစ်ဦးအဖြစ်အမည်ပြောင် Roschen ပေးထား leg've ချင်ပါတယ်သောကြောင့်နှင်းဆီခူးနေတုန်းကတောင်ကယ်ရိုလိုင်းနား, အမေရိကန်ကနေသူမအကြီးအ-အဖွား၏နာမတော်ခဲ့သောကြောင့်သူမသည်အမည်သစ်ကိုရသော Ladson ရွေးချယ်ခဲ့သည်။
4 မှဇူလိုင်လ 2019 15: 30
7 မှဇူလိုင်လ 2019 11: 32
စံချိန်တင်အဘို့, သူတို့ကဥရောပမှာရှိတဲ့ရိုက်ချက်များကိုခေါ်သူကိုဂျာမန်ဂျာမန်တို့၏အသွေးမရှိကြပေ။ သူတို့ '' ဂျာမန် '' အမည်များကို '' ဂျာမန် '' အမည်များကိုမွေးစားခဲ့ကြသူတို့ကဂျာမနီမှာအချိန်ကြာမြင့်စွာနေထိုင်ခဲ့ကြပြီဖြစ်သောကြောင့်နှင့်ဂျာမန်ယေဘုယျလူဦးရေအကြားတွင်ထွက်ရပ်တည်ရန်မဟုတ်ဆိုတဲ့အချက်ကို။ စင်ကြယ်သောနည်းပရိယာယ်။
13 မှအောက်တိုဘာလ 2019 00: 27
Albrecht ဆိုတဲ့နာမည်က Albright ကို ((Madeleine Albright)) လိုသတိရစေပါတယ်။
4 မှဇူလိုင်လ 2019 17: 18
ကျွန်မသူမအမည်ဖြင့်ဖော်ပြထားဘာတစ်ဗွန် der Leyen မှလက်ထပ် Wikipedia အပေါ်ကိုဖတ်ပါ။
4 မှဇူလိုင်လ 2019 18: 58
ဟုတ်ကဲ့, ဒါပေမယ့်အများအားဖြင့်ကိုယ့်သင့်ရဲ့ကလေးမွေးဖွားအမည်ယောက်ျား၏ယူဆ name ကိုနောက်ကွယ်မှလည်းစိတ်တော်။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်သူမ၏နွယ်ဖွားစိတ်ဝင်စားဖို့။ ယခုတွင်ငါသည်ကဂျာမန်ဝီကီပီးဒီးယားအပေါ်အနည်းဆုံးနာမတော်ကိုအမှီ ပြု. အဲလ်ဘရက်ခ်ဖော်ပြခဲ့တဲ့ကြောင်းသိမြင်ရကြ၏။
4 မှဇူလိုင်လ 2019 19: 51
နောက်တဖန်ကျနော်တို့ပြီးသားသိတယ်အဘယ်အရာကိုအတည်ပြုပေးသောကျိန်းသေဟာအလွန်ချွန်ထက်ဆောင်းပါး; (သူတို့ဖြစ်ပေါ်အဘယ်သို့ပြုမည်အရာကိုဆန့်ကျင်ကဲ့သို့) ကျွန်တော်တို့ဟာလူအများ၏သက်သာချောင်ချိရေးမနှင့် ပတ်သက်. အများရှိသော်လည်း, သာမိမိတို့ကိုယ်ပိုင်ရပ်တည်ချက်နှင့်အာဏာနှင့်အတူစိုးရိမ်ပူပန်နေကြသည်မိသားစုများလက်တဆုပ်စာအားဖြင့်အုပ်ချုပ်နေကြသည်။ (ထိုအဖြင့်ပုံပေါ်ရွှေ့)
4 မှဇူလိုင်လ 2019 22: 10
တစ်ဦးကလတ်ဆတ်တဲ့ယဉ်မိသားစုနှင့်အတူမှားယွင်းနေဝင်ဆာရဲ့ဘာမျှမ .. Nigel Farage သင်္ကာအက်ဒွပ် VIII တူပေမယ့်ကိုသာအနော့ရဲ့အကြောင်းကိုဘာမျှမပြောမယ့်အခွင့်အလမ်းဖွစျလိမျ့မညျ
4 မှဇူလိုင်လ 2019 22: 11
4 မှဇူလိုင်လ 2019 23: 32
5 မှဇူလိုင်လ 2019 13: 18
သူတို့ကကော်ဖီအပေါ် Neo မှကျေနပ်ပါလိမ့်မည် ..
5 မှဇူလိုင်လ 2019 12: 02
အဆိုပါအဲလ်ဘရက်ခ်အဖြစ်မြင့်မြတ်သောနှင့်သတ္တိမဟုတ်ခဲ့ကြောင်းစှဲနှင့်ပစ္စည်းပစ္စယပေးရတစ်ချိန်က ... အဲလ်ဘရက်ခ်ရှိပါတယ်ခဲ့သလဲ
5 မှဇူလိုင်လ 2019 13: 13
အဆိုပါ GDR ထံမှဤတွင်အခြားတဦးတည်း, ဝေးလံသောဆွေမျိုးသားချင်း?
အဲလ်ဘရက်ခ် stammte ဖြစ်ကာ einer Arbeiterfamilie im Ruhrgebiet ။ အဲဒီမှာ Wenige Monate nach seiner Ausbildung zum Schlosser wurde သားမွေး Dauer des Zweiten Weltkriegs ဇုရ Luftwaffe der Wehrmacht eingezogen သေဆုံးလျက်ရှိသည်။
7 မှဇူလိုင်လ 2019 22: 37
အဆိုပါ Albrechtjes ချောင်းဆိုး maarre မဟုတ်ဘာလို့လဲဆိုတော့သူတို့ကအားလုံးဆက်စပ်ဖြစ်ကြောင်း, တစ်ဦးကြွယ်ဝသောသမိုင်းရှိသည်မဟုတ်
5 မှဇူလိုင်လ 2019 20: 38
အဆိုပါ Goetia လည်းနတ်ဆိုးများကိုခေါ်နိုင်မယ့်စာအုပ်ဖြစ်ပါတယ်။ နတ်ဆိုးများကဤစာအုပ်ထဲတွင်ဖော်မြူလာဖမ်းမိခြင်းနှင့်ခွဲခြားခဲ့ကြပေသည်ရှောလမုန်သည်ထည့်သွင်းခဲ့ကြပေသည်။ Demonology သည်ဒါထိထိရောက်ရောက်။ ဗြိတိသျှဘုရင်မကြီးအဲလစ်ဇဘက်မှ 16e ရာစုယောဟနျသ Dee အကြံပေး၌ငါသည်လည်း Demonology အလုပ်လုပ်ခဲ့ပါသည်။ ထို့အပြင်ဘုရင်မကြီး၏ထိပ်ဖျားကိုပေါင်ဖြစ်ခဲ့သည်။ သူတို့ကိုရန်အလွန်အရေးကြီးသောအာဏာနှင့်ထိန်းချုပ်မှုသူတို့ကြိုးစားသောအနည်းဆုံးနတ်ဆိုးများ၏အကူအညီမှတဆင့်လည်းဖြစ်ပါတယ်။
အရမ်းဆိုးသူတို့သည်ကောင်းသောအမှုအရာတို့ကိုကျင့်ကိုကျင့်ကြသည်မဟုတ်။ တကယ်တော့သေခြင်းတရားကိုကြောက်နေသောသူသည်ဆင်းရဲသောသူငြိုငြင်။ သငျသညျအရာခပ်သိမ်းကျွမ်းကျင်လျှင်ကောင်းပြီ, သငျသညျသခွေငျး outsmart ချင်တယ်။ သို့သော်ကံမကောင်းစွာပင်သူတို့အဘို့အလူတိုင်းအတွက်လည်းမရှိ။
7 မှဇူလိုင်လ 2019 12: 42
အီးယူငါ plagiarism (Von der Leyen) ကျူးလွန်ခဲ့ကြလိမ့်မယ်ဒါမှမဟုတ်ထက်အကျင့်ပျက်ခြစားမှု (Lagarde) ၏ပြစ်မှုထင်ရှားခဲ့သကဲ့သို့, ရှင်းရှင်းလင်းလင်းတပြင်လုံးကိုတစ်ရောင်ပြန်ဟပ်မှုဖြစ်ပါတယ် gehouden.Maar တံခါးကိုအပြင်ဘက်ဆိုပုံမှန်လည်ပတ်လူ့အဖွဲ့အစည်းအတွင်းပြုလုပ်ထိုက်သောအရာကိုလူများ၏ဤအမျိုးအစားရရှိသွားတဲ့ သင်တစ်ဦးအကြီးတန်းအီးယူ drivers တွေကိုသင့်ရဲ့ကျွမ်းကျင်မှုကိုရွေးချယ်ပါလိမ့်မည်ရှိရာထိုအတိကျစွာများမှာထို့နောက်ဖြစ်ကြသည်နေမဟုတ်လျှင်ငါ၏အအလုပ်အလားအလာအလွန်အနည်းငယ်မျှသာရှိပါသည်။ Juncker ထိ မိ. လဲခြင်းနှင့်အီးယူအနက်ဆုံးသောတွင်းဆီသို့ဦးတည် drifts အဖြစ် ..
9 မှဇူလိုင်လ 2019 00: 05
အဆိုပါစူပါမားကတ် Aldi အဲလ်ဘရက်ခ် Diskont အတိုကောက်နှင့် Theo အဲလ်ဘရက်ခ်နှင့်အာကာအဲလ်ဘရက်ခ်ကတည်ထောင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ အဆိုပါအဲလ်ဘရက်ခ် Aldi ဂျာမနီမှာအချမ်းသာဆုံးမိသားစုများ၏တဝတည်းဖြစ်ကြ၏။
16 မှဇူလိုင်လ 2019 13: 52
ဒါဟာဗွန် der Leyen နေတိုးကနေဥရောပတပ်အသွင်ကူးပြောင်းရေးစောင့်ကြည့်ခြင်းနှင့်မြှင့်တင်ရန်ခနျ့အပျခဲ့ကွောငျးပုံရသည်။ သူမသည် Bundesministerin der Verteidigung အဖြစ်သူမ၏ယခင်အခန်းကဏ္ဍလေ့ကျင့်နိုင်ပါတယ် ..
« စနစ်မယ့်စောင့်ရှောက်ကူညီပေးနေစဉ်ကိုဘယ်လိုလူတွေ "သတိ" အကြောင်းပြောဆိုနိုင်သလဲ
စာသား soulless သင်တို့ပတ်လည်လူအတော်များများ (သက်မဲ့အလောင်း)? »
အီရန်, Soleimani အပေါ်တိုက်ခိုက်မှု, တန်ပြန်နှင့် PS752 လေယာဉ်ခရီးစဉ် PSXNUMX အားလုံးမြင်ကွင်းတစ်ခုအတွက်သတ်မှတ်?
မာတင် Vrijland op လစ်ဗျားလစ်ဗျားသည်ဥရောပ၌မည်သည့်နိုင်ငံများကတူရကီနိုင်ငံသို့ပထမဆုံးအကြိမ်ရောက်ရှိမည်ကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖော်ပြထားသည်
ZalmInBlik op ဘိုးရင်း ၇၃၇-၈၀၀ (လေယာဉ် PS737) ကိုဖြိုချခဲ့တဲ့အီရန်လေယာဉ်ပျံစနစ်ဟာတိုက်ခိုက်ခံရသလား။
Riffian op ဘိုးရင်း ၇၃၇-၈၀၀ (လေယာဉ် PS737) ကိုဖြိုချခဲ့တဲ့အီရန်လေယာဉ်ပျံစနစ်ဟာတိုက်ခိုက်ခံရသလား။